gyanendra shah(gyanendra shah) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
चुरोट पिउन छाड्दा पनि पूर्वराजालाई हृदयघातको संकेत !
काठमाण्डौ । सतप्रतिशत नशा ब्लकलाई खुलाउन एन्जियोप्लाष्टी गरिएको करिब तीन वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः नशा ब्लकेजको समस्या(हृदयघातको पूर्व संकेत) देखिएको छ । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नशा पूरै ब्लक भई हृदयघात भएको थियो, तर चिकित्सकहरुले समयमै उपचार गरेका कारण उनी ठीक भएका थिए । त्यसको करिब ३...
राष्ट्रपति कार्यालयमा पूर्वराजा आकर्षण
काठमाण्डौ । शीतल निवासमा अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकी छोरी र पूर्वसांसद किरण यादवका छोराबीच हुने बिहेको चर्चा थियो तर सोमबार भने अधिकांश आगन्तुकको जिज्ञासा अर्कै रह्यो– निम्ता मान्न पूर्व राजा शीतल निवास आउलान् कि नआउलान् ? राष्ट्रपति कार्यालयको कोसी हलमा विवाहित जोडीलाई बधाई र शुभकामना कार्यक्रम भइरहँदा सोमबार...
संघीयताको नाममा देश मास्न खोजिएको पूर्वराजाको दाबी, चूप लागेर नबस्ने चेतावनी
काठमाण्डौ । पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयताकै कारण देश नै नरहने चिन्ताजनक अवस्था आएको दाबी गरेका छन् । उनले संघीयताको नाममा देश र जनतामा बिखण्डनको विषारोपण गरी देश नै नरहने चलखेल गर्न दिइएको भन्दै आफूहरु चूप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘चारवर्ण छत्तीस जातको...
बेमौसममा आयो पूर्वराजाको अहिलेसम्मकै कडा वक्तव्य, देशमा केही हुन लागेको हो ?
काठमाण्डौ । न कुनै दिवस, न कुनै उत्सव वा महोत्सव वा कुनै विशेष अवसर । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुधबार साँझ बेमौसमी वक्तव्य जारी गरेपछि यसले संविधान संसोधनको मुद्धाका कारण पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य यसरी एकाएक के कारण आयो होला ? हालै चिन भ्रमणमा गएको बेला उच्च प्राथमिकतामा परेका...